norvic hospital. Archives - Nagarik Today
होम » norvic hospital.
थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलले बन्द रहेको ओपिडी सेवा आगामी आइतबारदेखि पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कोभिड—१९ को दोस्रो लहरको सङ्क्रमण तीव्र बनेसँगै बिरामीको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नर्भिकले ओपिडी सेवा बन्द गरेको थियो ।
पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमण निरन्तर घटिरहेको छ । कोभिड सङ्क्रमण घटेसँगै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने कोभिड बाहेकका बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ । कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या घट्नु र कोभिड बाहेकका बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि उनीहरुको स्वास्थ्य सेवालाई ध्यानमा राखी निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको छाता सङ्गठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन अफ नेपाल (अफिन) को निर्णयअनुसार नर्भिकले ओपिडी सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने भएको हो ।
जेष्ठ २९, २०७८0comment
तीन वर्षपछि निशाको जीवनमा आशाको झिल्को – नर्भिक अस्पतालले गर्‍यो निशाको उद्धार
तीन वर्षअघिसम्म मोडलिङको चमकदमकपूर्ण संसारमा रमाइरहेकी थिइन् निशा घिमिरे । तर, एउटा अकल्पनीय दुर्घटनाले उनको जीवन तहसनहस बनाइदियो ।
२०७५ सालमा अभिनयको कोर्स पढ्न उनी भारतको देहरादून जाँदै गर्दा सडक दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भइन् । दुर्घटनालगत्तै उनको भारतकै अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो । तर, त्यहाँ उपचार महङ्गो भएपछि कमजोर आर्थिक अवस्थाका उनका बुबाआमाले छोरीलाई नेपालमै ल्याए ।
उनलाई नजिकबाट चिन्ने र उद्धारका लागि समन्वयकर्ताको भूमिका खेलेका नवजीवन परोपकार समाजका सञ्चालक दुर्गानाथ दाहालका अनुसार पहिले ६० किलोकी निशा अहिले २० किलो मात्र छिन् । झट्ट हेर्दा ‘३ वर्षअघिकी कलकलाउँदी निशा यिनै हुन् भनेर धेरैलाई पत्याउनै मुस्किल पर्छ ।
यो अवधिमा निशाको बारेमा समाचारहरु समेत प्रकाशन भएका थिए । तर, उनलाई उद्धार गर्न, उचित उपचार व्यवस्था मिलाउन कसैले पनि सहयोग गरेनन् । बिहीबार बिहान नर्भिक अस्पतालले उनलाई एम्बुलेन्समा राखेर उपचारका लागि लगेको छ । हाल उनको नर्भिकमा उपचार सुरु भएको छ ।
नवजीवनका सञ्चालक दाहालले निशाको अवस्थाका बारेमा तस्वीरसहित सहयोग अपिल गर्दै पोष्ट गरेका थिए । त्यसमा नर्भिककी प्रवन्ध निर्देशक मेधा चौधरीको आँखा पर्‍यो । उनले चासो राखिन् र उद्दारको पहल गरिन् ।
‘आमाबुबा दैनिक ज्यालादारी गर्न जानुपर्ने भएकोले उनको पर्याप्त हेरविचार समेत हुन सकेको थिएन,’ दाहालले भने- ‘उहाँका विषयमा मैले फेसबुकमा पोस्ट गरेको थिएँ, त्यसमा नर्भिककी प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले चासो राख्नुभयो र उहाँले आफ्नो समन्वयमा उपचार प्रबन्ध मिलाउनुभएको हो ।’
नर्भिकका चिकित्सकहरुले निशाको अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन् ।
‘पहिलाजस्तै मोडलिङ नै गर्ने गरी त ठीक नहोला,’ चिकित्सकहरुलाई उद्धृत गर्दै दुर्गा दाहालले भने, ‘तर कम्तीमा आफैं हिँडडूल गर्नसक्ने, आफैं खानसक्ने र केही बोल्न सक्नेसम्म पनि भयो भने पनि राम्रो हुन्छ ।’
हाल निशा बोल्न सक्दिनन् । खाना पनि अरुले खुवाइदिनुपर्छ । कसैले केही कुरा गर्‍यो भने सुन्न सुन्छिन् र आँसु बगाउने गर्छिन् । जवाफ दिन वा अरुलाई रेस्पोन्स गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।
हातखुट्टा नै कुँजिएर ओछ्यान परेको ३ वर्षपछि नर्भिकले उद्दार गरेकोमा छिमेकी र उनका अभिभावकसमेत खुशी छन् ।
‘यो कलियुगमा पनि भगवान हुँदा रहेछन् । मेरी छोरीलाई उद्धार गर्नेको भलो होस्,’ निशाका बुबाले भने- ‘छोरी जिउँदो लाश भएर लडेकी ३ वर्ष भयो । अब चाहिँ थोरै भए पनि उठ्छे कि भन्ने आशा पलाएर आएको छ ।’
उद्धारकर्ता नर्भिक अस्पतालकी प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले घिमिरेको दर्दनाक अवस्था फोटोमा देखेपछि आफूले उद्धार गरेको बताइन् । अब आफ्नै समन्वयमा उनको सम्भव हुनेजति उपचार गरिने उनले जानकारी दिइन् ।
निशाले नेपाली र मैथिली भाषामा बनेको फिल्म ‘मधेसीपुत्र २’ मा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् । उनले ‘डियर जिन्दगी’ टेलिश्रंखला, केही म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरिसकेकी छिन् ।
बाँच्लिन् भन्ने आशै थिएन – प्रेमप्रसाद घिमिरे (निशाका बुबा)
दुई साल अगाडिको घटना हो । २०७६ सालको पुस १५। १६ गतेको घटना हो । डिप्लोमा पढ्छु भनेर इन्डिया गएकी थिइन् । उसको घटना भैसकेपछि मोबाइल पुलिसले भेटायो । त्यहाँमार्फत हामी पत्ता लगायौं । लगत्तै हामी देहरादुन गयौं । त्यहाँको एक अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो । त्यो बेला बाँच्ला भन्ने आशा थिएन । २० दिन त्यहाँ उपचार गरेपछि काठमाडौंको वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टरमा ल्याएर भर्ना गरियो । बनेपाको स्पाइनलर इन्जुरी अस्पतालमा पनि लग्यौं । त्यहाँ पनि नभएपछि कोठामा ल्याएर राख्यौं । कोभिडको लहर सुरु भएपछि अहिले घरमा ल्यायौं । गाईको दूध बेचेर कमाएको पैसाले जसोतसो उसलाई खुवाएर राखेका छौं ।